Runako uye Kuchengeta Kwevanhu Vagadziri - China Runako uye Kuchengetedza Kwevanhu Vatengesi & Fekitori
Kubva: Jiangsu, China
Kupa Rudzi: OEM / ODM
Certification: CE FDA MSDS SVIRA ISO9001
Ruvara: Chero Ruvara runogona kuvezwa
Kupa Mazano: 1000000 Piece / Pieces pamwedzi
Inogona kuve yakagadzirirwa nechero saizi uye mavara ane akakwira MOQ.
Gel bead chando chando ziso compress mask
Chinyorwa: PVC / EVA / TPU
Kudya: Gel, inogona kuwedzera kupenya
OEM: kupenya chimiro kana ruvara, logo yakadhindwa kana yekucheka chitaridzi, 3D katuni nzeve, dete jira zvadzo kudhinda, pasuru bhokisi kana bhegi, kuratidzira kuratidza bhokisi.
Kupa kugona: 1000000 zvidimbu / pamwedzi.
1.Hot & inotonhorera pack iri yakapfava, yakazara gel-mutsamiro inotonhora mufiriji yako, yakagadzirira kushandisa yekukurumidza kurwadziwa kuzorodzwa kumba.
Inoramba ichinyatsogadzikana uye inogona kushandiswa pane chero chikamu chemuviri, ichiita kuti ive yakanaka kumabumps madiki, kupwanya, mhasuru aches, kutsemuka, kupwanya, kushushikana kwemusoro, kutsva kudiki uye kurumwa nezvipembenene.
3.Simply isa Reusable Cold muromo gel Mapake mufiriji mushure mekushandisa kwega kwega, uye ivo vakagadzirira inotevera nguva.
4.Ndiyo nzira iri nyore yekushandisa inotonhora yekutanga rubatsiro. Jira rejira rinosanganisirwa nyaradzo huru.